ကှနျပြူတာ၊ ဖုနျးတှကွေောငျ့ဖွဈတဲ့(Digital eye strain) မကျြစိအောငျ့တာကို ဘယျလိုသကျသာအောငျ လုပျကွမလဲ – DVB
ကှနျပြူတာ၊ ဖုနျးတှကွေောငျ့ဖွဈတဲ့(Digital eye strain) မကျြစိအောငျ့တာကို ဘယျလိုသကျသာအောငျ လုပျကွမလဲ
Published By DVB | 31 August, 2019
အရငျတုနျးကတော့ ငယျငယျရှယျရှယျနဲ မကျြစိ ဆေးခနျးသှားရ မကျြမှနျတပျရတာမြိုးတှေ မရှိပမေယျ့ ခုနောကျပိုငျး ဖုနျးခတျေ ကှနျပြူတာခတျေရောကျမှ မကျြစိဆေးခနျးတှလေူပွညျ့၊ ငယျငယျလေးနဲ့ မကျြမှနျသမားတှဖွေဈ မကျြလုံးဝဒေနာတှတေဈပုံကွီခံစားနရေတဲ့ သူတှေ အမြားကွီးပါ။ ဒီထဲကမှ အမြားဆုံးကတော့ Digital eye strain လို့ချေါတဲ့ ကှနျပြုတာ ဖုနျးတှကေ ထှကျလာတဲ့ရောငျခွညျကွောငျ့ မကျြလုံးညောငျး မကျြလုံးကိုကျတဲ့ဝဒေနာကို ခံစားနရေတဲ့သူတှကေ ပိုမြားပါတယျ။
ဒီနညျးအတိုငျးသာ သခြောလိုကျနာပွီးလုပျသှားရငျ Digital eyestrain ဝဒေနာ သကျသာသှားမယျ့အပွငျ ဖုနျးတို့ ကှနျပြူတာတို့ကွောငျ့ နောကျပိုငျး ထိခိုကျမယျ့မကျြလုံး ပွဿနာတှနေဲ့ပါ ကငျးဝေးပွီးသား ဖွဈမှာပါ ။ ။
ရေးသားသူ Dr. Thin Yadanar @ Frances ဆေးပညာပိုငျးဆိုငျရာတညျးဖွတျသူ Dr. Thurein Hlaing Win ဤဆောင်းပါးကို DVB ၏ မိတ်ဘက် ကျန်းမာရေးနှင့် ဆေးပညာဝက်ဘ်ဆိုဒ် hellosayarwon.com မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Zawgyi_version ကွန်ပျူတာ၊ ဖုန်းတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့(Digital eye strain) မျက်စိအောင့်တာကို ဘယ်လိုသက်သာအောင် လုပ်ကြမလဲ အရင်တုန်းကတော့ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ မ်က္စိ ဆေးခန်းသွားရ မျက်မှန်တပ်ရတာမျိုးတွေ မရှိပေမယ့် ခုနောက်ပိုင်း ဖုန်းခေတ် ကွန်ပျူတာခေတ်ရောက်မှ မျက်စိဆေးခန်းတွေလူပြည့်၊ ငယ်ငယ်လေးနဲ့ မျက်မှန်သမားတွေဖြစ် မျက်လုံးဝေဒနာတွေတစ်ပုံကြီခံစားနေရတဲ့ သူတွေ အများကြီးပါ။ ဒီထဲကမှ အများဆုံးကတော့ Digital eye strain လို့ခေါ်တဲ့ ကွန်ပျုတာ ဖုန်းတွေက ထွက်လာတဲ့ရောင်ခြည်ကြောင့် မျက်လုံးညောင်း မျက်လုံးကိုက်တဲ့ဝေဒနာကို ခံစားနေရတဲ့သူတွေက ပိုများပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့် ဒီ ကွန်ပျူတာ ဖုန်း တွေက မျက်လုံးညောင်းတာကိုဖြစ်စေရတာလဲ။ မျက်လုံးမခြောက်အောင်လို့ ပုံမှန်ဆို တစ်မိနစ်ကို ၁၅ ကြိမ်ကနေအကြိမ်၂၀လောက် မျက်တောင်ခတ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရုပ်ရှင်ကြည့် ဖုန်းပွတ် ကွန်ပျူတာသုံးတဲ့အချိန်တွေမှာဆို မျက်တောင်ခတ်နှုန်းက တစ်ဝက်လောက် လျော့ကျသွားတယ်လို့ လေ့လာချက်တွေ အရသိရပါတယ်။ နောက်ပြီး ဖန်သားပြင်ရဲ့ အလင်းအမှောင်၊ ရောင်ခြည်တွေနဲ့ စာလုံးတွေကလည်း မျက်လုံးညောင်း မျက်လုံးအောင့်တာကို ဖြစ်စေတဲ့ တရားခံတွေပါ။ ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲ။ အလုပ်ကလည်း ကွန်ပျူတာကိုင်ရတဲ့အလုပ်၊ ဖုန်းမပွတ်ဘဲနဲ့လည်း မနေနိုင် တီဗွီကြည့်ပြီး အပန်းကလည်းဖြေချင်သေး မျက်လုံးအောင့်မှာလည်း ကြောက်နေဆိုတော့ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ ဘာမှ မကြည့်ဘဲနေရတော့မှာလား။ Digital eye strain မဖြစ်အောင်လို့ ကိုယ်လုပ်ချင်တာတွေအားလုံးကို စွန့်လွှတ်လိုက်စရာမလိုပါဘူး။ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ အမူအကျင့်လေးတွေ နည်းနည်းလေး ပြောင်းလိုက်တာနဲ့တင် ရပါပြီ။ မျက်လုံးနဲ့ တီဗွီဖန်သားပြင်နဲ့ ၂၅ လက်မလောက် အကွာ( လက်တစ်ဆန့် အကွာအဝေး) လောက်မှာထားပါ။ TV ဖန်သားပြင်ကို မျက်လုံးနဲ့တစ်တန်းတည်းမဟုတ်ဘဲ အောက်ဘက်ကို ၁၅ ဒီဂရီလောက်စောင်းထားပါ။ ၂၀-၂၀-၂၀ rule အတိုင်းလုပ်ပါ။ တစ်ခုခုကို မိနစ် ၂၀ ကြည့်ပြီးတိုင်း ပေ ၂၀ အကွာအဝေးက အရာတစ်ခုခုကို ၂၀ စက္ကန့်လောက် ကြည့်ပါ။ ၂ နာရီကြာ ကြည့်ပြီးတိုင်း ၁၅ မိနစ်လောက် မျက်လုံးကိုအနားပေးပါ။ မျက်လုံးခြောက်ပြီး စပ်တယ်လို့ ခံစားလာရတိုင်း မျက်ရည်တုထည့်ပါ။ အဲယားကွန်း ရှေ့တည့်တည့်မှာ မနေပါနဲ့။ အဲယားကွန်းက လေတွေက မျက်လုံကိုခြောက်စေတတ်လို့ပါ။ အခန်းအတွင်းက အလင်းအမှောင်နဲ့ ဖန်သားပြင်က အလင်းအမှောင်ကို ချိန်ဆပါ။ ဖန်သားပြင်က အလင်းက ပိုလင်းနေတာမျိုး မဖြစ်ပါစေနဲ့။ ဖန်သားပြင်က အလင်းအမှောင်တွေကို သေချာချိန်သုံးပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်က အလင်းထက် လျော့နေလို့လည်း မကောင်းသလို အရမ်းကြီးလင်းနေပြန်ရင်လည်း အဆင်မပြေပါဘူး။ စာလုံး မမြင်ရရင် အကြီးချဲ့ထားပါ။ ဖန်သားပြင်ရဲ့ အရောင်ကို လျှော့ထားပါ။ အဖြူတို့ အပြာတို့အစား အဝါဘက်ရောက်တဲ့ အရောင်တွေ ပိုသုံးပေးပါ။ မျက်ကပ်မှန်အစား မျက်မှန်သုံးပြီး ကွန်ပျူတာ ကြည့်တာက ပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ မျက်လုံးကို ပုံမှန် စမ်းသပ်ပါ။ ကွန်ပျူတာသုံးမျက်မှန် သပ်သပ်ထားဖို့လည်း လိုရင်လိုပါလိမ့်မယ်။ ဒီနည်းအတိုင်းသာ သေချာလိုက်နာပြီးလုပ်သွားရင် Digital eyestrain ဝေဒနာ သက်သာသွားမယ့်အပြင် ဖုန်းတို့ ကွန်ပျူတာတို့ကြောင့် နောက်ပိုင်း ထိခိုက်မယ့်မျက်လုံး ပြဿနာတွေနဲ့ပါ ကင်းဝေးပြီးသား ဖြစ်မှာပါ ။ ။ ရေးသားသူ Dr. Thin Yadanar @ Frances ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Thurein Hlaing Win ဤဆောင်းပါးကို DVB ၏ မိတ်ဘက် ကျန်းမာရေးနှင့် ဆေးပညာဝက်ဘ်ဆိုဒ် hellosayarwon.com မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
(Digital eye strain)မကျြစိအောငျ့တာ